​Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay Safarkiisa Qandala iyo dilalkii ka dhacay Bosaso [Dhagayso]
BOSASO, Puntland- Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas, ayaa ka hadlay safar qaatay muddo 3 saac ah oo isaga iyo xubno katirsan dowladda ku tageen degmada Qandala ee gobolka Bari.
Gaas, ayaa waraysi uu siiyay VOA, ku sheegay in degmadan ay tahay mid taariikhi ah islamarkaana khayraad badan ka helaan shacabka Puntland, balse dhibaato xooggan u gaysteen koox katirsan Daacish.
Madaxweyanaha, ayaa xusay in safarkan oo dhinaca badda ahaa, la xiriiro sidii dadka deegaanka loogu boorin lahaa inay dib usoo laabtaan magaalada iyadoo la howlgalinayo dhammaan xarumihiin bulshada iyo kuwii dowladda ee laga qaxay.
Mar wax laga weydiiyay halka ay ku dambeeyeen kooxdii qabsaday Qandala, wuxuu sheegay inay qaybtood gacanta ku dhigeen, koox kale firxadeen halka kuwo kale lagu raad joogo isagoo ballanqaaday inaysan sii joogi doonin Puntland, wuxuuna ku sifeeyay Khawaarijiyiin ilaahay ka fogaaday oo dadka dhibaataynaya.
Madaxweynaha, ayaa sidoo kale ballanqaaday in magaalada joogi doonaan ciidamo katirsan Puntland, kuwaasoo ka hortagi doona falalka Xagjiriinta.
Wuxuu xusay inuu kormeer kusoo sameeyay dhammaan qaybaha magaalada isagoo intaas ku daray inuu tagay goobihii caafimaadka, waxbarashada, saldhigga booliiska iyo goobo kale, kuwasoo kusoo arkay dhibaato laxaad leh.
"Waxaan booqday cusbitalka magaalada, waxaan soo aragnay bur-bur loo gaystay sida tallaagadihii iyo soollarkii cusbitaalka oo ay xabad la dhaceen kooxdaas oo runtii aan wax wanaag ah u wadani bulshada,"Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Cabdiwali Maxamed Cali, ayaa sidoo kale sheegay inay amarsiiyeen wasaaradaha Caafimaadka iyo waxbarashada si dadka deegaanka wax loogu qabto.
Madaxweynaha ayaa dhinaca kale wax laga weydiiyay, dilal ka dhacay magaalada Bosaso oo lagu laayay mas'uuliyiin katirsan dowladda, wuxuuna sheegay inay rajo wanaagsan qabaan islamarkaana gacanta kusoo dhigi doonaan dadkii falkaas fuliyay, wuxuuna sheegay in magaalada Bosaso tahay amni.
Hadalka Gaas, ayaa yimid xilli wali laamaha amnigu gacanta kusoo dhigin kooxihii ka dambeeyay dilka saraakiishaas iyadoo sidoo kale aan war laga hayn halka ay ku dambeeyeen kooxdii ka baxday degmada Qandala ee sheegatay inay katirsantahay Daacish.
​Puntland oo gacanta ku dhigtay degmada Qandala
BOSASO, Puntland- Ciidamada Puntland, ayaa lagusoo waramayaa inay gudaha u galeen degmada Qandala ee gobolka Bari, kadib markii ay isaga baxeen mallayshiyaad sheegtay inay katirsanyihiin kooxda Daacish oo halkaas ku sugnaa muddo bil ah.
Holwgal xoog leh a ...
Ciidamada Puntland oo ku dhowaadey Qandala, Gudoomiye Dhedo oo hogaaminaya
​Madaxweyne Gaas oo khudbadiisa sannad laha ah ka jeediyay Magaalada Bosaso
​Dhedo oo khasaaraha howlgalka Qandala Radio Garowe uga waramay
​Wararkii ugu dambeeyay degmada Qandala
Laanta Af-Somalida ee BBC oo qof khalad ah ka wareysatey dagaalka Qandala
​Puntland: Rag katirsan Daacish oo la xukumay [Dhagayso]
​Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay xaaladda Qandala [Dhagayso]
Ciyaartoyda Manchester United oo waji-gabax kula laabtey England 23.11.2017. 15:32
Dib udhac ku yimid magacaabista Wasiirada Hirshabeelle 23.11.2017. 13:20
Dood ka timid Ansixinta Hindise Sharciyeedyada Xukuumadda 23.11.2017. 12:26
Weerar ka dhacay degmada Dhoobley [Fahfaahin] 23.11.2017. 11:52
UEFA oo baaritaan ku heysa Laacibka Dani Carvajal 23.11.2017. 11:02
Gudoomiyaha Barlamanka Jabuuti oo yimid Muqdisho 23.11.2017. 10:22